DHEGEYSO-Barnaamijkii xulashada Daljir iyo Cabdifataax Cumar Geeddi. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Barnaamijkii xulashada Daljir iyo Cabdifataax Cumar Geeddi.
Nofeembar 22, 2016 3:32 b 0
Laascaanod, Nov 22 2016—Kulan wanaagsan kusoo dhowaad barnaamijkii duhurnimo ee Xulashada Daljir, oo idin kaga imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana soo jeedinaya Cabdifataax Cumar Geeddi.
Xulashada Daljir waxaa idiin sahashay shirkadda GOLIS. Isgaarsiin waa Golis. Isgaarsiinta gayigeena. Adeeg casri ah yuu ku seegin adna ha seegin oo ha ka maqnaan baraha bulshada. GOLIS, isgaarsiinta gayigeena! GOLIS KU DOORO HAL ABUUR IYO HORUMAR JOOGTA AH! Audio Player
DHEGEYSO-Nin xoolihiisii abaartu dhaafisay oo isdaldaley.
DHEGEYSO-Madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay inay bixiyeen daymihii lagu lahaa.